Mahiga oo u digay madaxda Soomaaliya - BBC Somali
Mahiga oo u digay madaxda Soomaaliya
3 Agoosto 2012
Image caption Wakiilka QM ee Soomaaliya, Augstine Mahiga
Warkan ka soo baxay xafiiska ergayga qaramada Midoobay u qaabilsan somaliya danjire Augastin Mahiga waxuu kaga hadlay. Geedi socodka socda ee ansaxintan dastuurka, isagoo sidoo kalena xusay marxaldihii la soo maray, iyo halka la hiigsanayo marka ay timaado dhaqan galainta road map-da ee qariirada nabada. Waxuu shay taariiqi ah ku tilmaamay ergayga qaramada Midoobay ee soomaliya in Soomaliya loo yagleelo dastuur cusub.
Waxuu mahad u celiyay odoyaasha dhaqanka qaybta ay ka qaateen xulista ergaxada ansaxinta Dastuurka.
Mahiga waxuu marxalad adag ku tilmaamay xulista xubnaha baarlamaanka cusub. Oo la doonayo inay sal u noqdaan dowlad wanaag sidoo kale xulistan xubnaha cusub waxay tijaabo u tahay sharafka odoyaal dhaqameedyada oo laga sugayo inay soo xulaan barlamaan ka shaqeeya danaha dadka soomaliyeed. Iaydoo dadka soomaliyeed ay si weyn u aamineen odoyaal dhaqameedyada.
Augastine Mahiga waxuu xubnaha barlamaanka ku tilmaamay inay tahay isxilqaamid ee aysan ahayn wax shaqo laga dhigto. Waxaana ayuu yiri aan filayaa in xubnaha cusub ee baarlamaanka ay u hogaansami doonaan mabaadiidaasi.